SomaliNet Magazine: JANAAYO 2002
BAAHIDA LOO QABO BULSHO SOOMAALIYEED OO AQOON LEH
Sannadihii u dhexeeyey 1920-kii ilaa iyo 1950-kii, ma ahayn dhaqaale ahaan wax fiican?in Wiilka dhalliynarada ah oo Maraykanka ama Japanese-ka ah uu Iskuul waqti isaga lumiyo. Dadka badankoodu waxay u shaqayn jireen warshadaha macdanta ama kuwa baabuurta, waxayna ka samayn jireen nolol-maalmeed fiic
Ugu horreyntii Allah baa mahad leh oo noo suuro galiyay inuu soo baxo magazine/kan ku qoran intiisa badan afka soomaaliga oo aan filayo in bulshaweynta soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay aad uga faa`idaysan doonaan una jeclaysan doonaan.
TARTANKII CAYAARAHA KUBBADDA CAGTA BARIGA IYO BARTAMAHA AFRIKA OO LASOO GABO-GABEEYAY
Tartankii ciyaaraha kubbadda cagta horyaalada ee dalalka bariga iyo bartamaha Afrika ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan ?CECAFA? ayaa 22kii december 2001 lagu soo gabagabeeyay dalka Ruwaanda, iyadoo ciyaartii kama dambaysta ahayd ay isku haleeleen kooxaha Eth
CIYAARYAHAN MUSTAQBAL LEH
Ciyaaryahan Cabdullahi Axmed Maxamed wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho, sannadku markuu ahaa 1986dii. Cabdullahi waa arday dhigta dugsiga sare Washburn ee gobolka Minnesota. Waxa uu ciyaaraa Kubbaddda koleyga (Basket-ball), dhererkiisu waa 6.5, wuxuuna ka
TAARIIKHDA E-MAILKA IYO CALAAMADA @
Marna maku fekertay e-mailkan intaad qortid ka dhacaya isla markiiba aduunka dhinaciisa kale yaa suurto galiyey maxaase loo suurto geliyey? Sannadahan danbe waxaa caan noqotay in e-mailku uu noqdo qayb ka mid ah nolol maalmeedka dad aad u badan. Intaynaan u guda gelin taariikhda e-mailka ayaan waxy
KA HADALKA FAGAARAYAASHA
Allaah ayaa mahad oo dhan iska leh Nabigana (scw) naxaris iyo nabadgalyo korkiisa allah ha yeelo (scw).
Mar kasta oo laga hadlo mawduuca ka hadlaka fagaaraha, waxaa la is waydiiyaa su?aalo ay ka mid yihiin: Waa maxay codarnimadu? Shareecada Islaamku maxay ka qataa fagaare ka hadalka? Cod
GABAY - KUWII CARARAY
Gabaygaan maga ciisa la yiraahdo ku wii cararay waxaa tiriyay (sayid maxamed c/dulle xasan) ilaahay ha u naxariistee,waxa uu tiriyay mar rag ka mid ah daraawiishta oo markaas dagaalka ku cusbaa ay soo baqdeen. Sidaad og soon tahay waxaa daraawiishta ceeb ka ahaa cararka iyo baqashada ragaa cusub
BARNAAMIJKA XIDIGAHA - ISAAQ DHEERE
Ummad kasta oo dunida guudkeeda ku nool waxay leedahay xiddigo caan ku ah Isboortiga noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo gaaray heer qaran iyo heer caalami intaba, Xubinteena joogtada ah ee ku saabsan Xiddigaha waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhaha Xiddigihii soo maray ummadda Soomaaliyeed kuwaasi
KOOXDA KUBBADDA CAGTA EE MUSTAQBALKA (SOMALI TIGERS)
Kooxda kubbadda cagta ee Somali Tigers waxaa la aasaasay dhammaadkii sannadkii 1996dii. Aasaaskeedana waxaa ka dambeeyay xafiiska isu-tagga jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Minnesota loona yaqaano (Confederation Of Somali Community In Minnesota) oo ku yaal magaalada Minneapolis, gaar ahaan xa
SOMALIA IN CRISIS: WHAT WENT WRONG?
There is hardly any difference among Somalis that there is a crisis. Our very existence as a nation is in serious jeopardy and our territorial integrity is being threatened. There are many people making various diagnosi
SOOMAALIYA TAARIIKHDA HORTEED (SOMALIA PRE-HISTORY)
Culuumta taariikhda qeybteeda aanan laga heynin wax qoraallo ah ama sheekooyin la raad raaco, waxaa lagu magcaabaa taariikhda horteed (pre-history). In badan ayaa lagu howlanaa in wax laga ogaado sida ay noloshu aheyd taariikhda horteed. Waxaase jirta in natiijooyinka arrinkan laga gaarey ay yihiin
SHEEKO TAXANE AH: KULANKII BARAKAYSNAA
Sheeko run ah oo ku dhacday wiil iyo gabar Soomaliyeed.
Maxaad samayn lahayd haddii gabadhii aad jeclayd waaridkeed u sheegaan in hadday ku guursato la dayrinayo.
Maxaad samayn lahayd adiga oo Keenya qaxooti ku ah, dhaqaale la?aan k
WARAYSI MAAMULAHA URURKA DHALLINYARADA SOOMALIYEED EE MINNESOTA (SOMALI YOUTH ASSOCIATION)
Sidaan dhamaanteen la socono xiriir weyn ayaa ka dhexeeya horumarka ummadaha iyo dadaalka dhallinyarada. Soomaliya inay xorriyad qaadato waxaa sabab u ahaa ururkii dhallinyarada Soomaliyeed (S.Y.L) kuwaasi oo halgan dheer u soo maray sidii looga xoroobi lahaa gumeysiga, isla markaana dhibaatada loo
MAXAA LOO EEDEEYAY MAGACA SOMAALI?
Teer iyo markaan caqliyasatay ilaa iyo hadda waxaan markasta is weydiiyaa waa kuma somaliga la wada eedeeyo? Ma wax baa naga khaldan? Hadday wax ina ka khaldan yihiin ma sixi karnaa oo hal hayska u ah qof kasta oo soomali ah oo arka wax bulshada dhex deeda ku xun. Waa kee eedeeysane kan eedeeynaya m
Soomaalida oo dad xoolo-dhaqato ah ayaa dagaalada iyo gacan ka hadalku wuxuu ahaa mid saameeya noloshooda. Sababtuna waxay aheyd kheyraadka dabiiciga ah oo ku yaraa. Isha qura ee dhaqaale waxay aheyd biyaha. Colaadda inteeda badanna biyaha ayaa sabab u ahaa. Dagaaladaas bada
AQOONYAHAN WAXNA U DHAN WAXNA U DHIMMAN
Gugiisii kontonaad ayuu Mooge markii ugu horreysey magaalada u soo safray isaga oo xanuun ku raagay daawo u doonayey. Sidii loogu warramayba, wuxuu sii qaatay xoogaa lacag ah oo uu saad ka dhigto. Hadduu habeenkii guure soo ahaa, barqadii goor ay tahay ayuu dhinac ka soo galay magaaladii, mar haddaa
SOOMAALIYA IYO SANNADKII 2001
-	Labo kooxood oo qol yar isku haysta ayaa mid ka mid ahi dab qabadsiiyeen suuqa weyn ee Bakaaraha ee Xamar, halkaas oo xoolo farabadani ku gubteen.
WAA MAXAY CUDURKA SONKORTU?
Inta aynaan bilaabin qormadeenna bal aynu ka hormarino in yar oo gogaldhig ah.
Waxaa waayadaan dambe soo if baxay cudurro tiro badan oo aad u halis ah oo lagu arkay dadka somalida,